हरेक बिहान भिजेका चनाहरु चपाउदा यस्ता फाइदा हुन्छन् - यादका टुक्रा
हरेक बिहान भिजेका चनाहरु चपाउदा यस्ता फाइदा हुन्छन्
पोषणको मामिलामा चना निकै सस्तो, सुलभ तथा उपयुक्त विकल्प हो । चनामा प्रोटिन, फाइबर, लवण तथा भिटामिनहरु प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जसले शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्धत गर्नुका साथै विभिन्न रोगहरुबाट पनि बचाउँदछ । उसो त चना हरेक उमेर तथा लिंगका मानिसहरुका लागि लाभायक हुन्छ । त्यसमा पनि पुरुषहरुका लागि हरेक दिन बिहान भिजेको चना खानु निकै महत्वपूर्ण तथा लाभदायक मानिन्छ । हरेक बिहान भिजेको चना चपाउनुका फाइदा यी हुन्:
· भिजाएको चना उर्जाको ठूलो श्रोत हो, जसको नियमित सेवनले कमजोरीबाट मुक्ति पाइन्छ । भिजाएको चनामा धेरै फाइबर पाइन्छ । यसले पाचन क्रियालाई सन्तुलित पार्दछ र कब्जियत पनि हटाउँदछ । हरेक दिन बिहान कम्तिमा १ मुठी भिजेको चना खाने गर्नुस् । यसले प्रजनन क्षमता तथा शुक्रकिटको गुणस्तर तथा संख्या बढाउँदछ । भिजेको चनालाई महमा मिलाएर खानाले प्रजनन शक्ति तथा यौन क्षमता पनि बढाउँदछ ।
· पटक पटक पिसाब गइरहनुपर्ने तथा पाइल्सको समस्या छ ? यदि त्यसो हो भने नियमित रुपमा रहेक बिहान भिजेको चना खाने गर्नुस् । छालालाई स्वस्थ राख्नका लागि तथा चिलाउने, दाद, धब्बा जस्ता समस्या कम गर्नका लागि पनि नियमित रुपमा भिजेको चना खाने गर्नाले फाइदा पुग्दछ । शरीरको वजन वृद्धि गर्न, मांशपेशी बढाउन तथा ससक्त बनाउन पनि चनाको नियमित सेवन गर्नुपर्दछ । भिजेको चनाको नियमित सेवनले सरीरमा रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउनुका साथै रुघाखोकीको समस्या पनि कम गर्दछ ।
· चनामा पर्याप्त मात्रामा फस्फोरस लवण पाइन्छ जसले हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउँदछ साथै मृगौलालालाई समेत स्वस्थ राख्न सहयोग गर्दछ । रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियन्त्रण गरी मुटुलाई स्वस्थ राख्न तथा मुटु र रगत सम्बन्धी समस्याबाट जोगाउन पनि चनाले सहयोग गर्दछ । भिजाएको चना नियमित खानाले शरीरमा मेटाबोलिज्म अर्थात् उर्जाको दहन तिब्र बन्दछ । जसका कारण रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण हुने र मधुमेहबाट जोगिन सहयोग पुग्दछ । चना आइरनको राम्रो श्रोत हो । भिजाएको चना नियमित रुपमा खानाले रक्तअल्पताको समस्याबाट बच्न सकिन्छ । एजेन्सी
Don't Miss it यी खानेकुरा बिर्सेर पनि नराख्नुस् फ्रिजमा
Up Next कहिलै पनि नफ्याल्नु बासीभात, यति गरे जडी ओखति बन्दछ
तपाईलाई यो मन पर्ला
खाना पकाउँदा गरिने यस्ता साना गल्तिले रोगी बनाउँछ
खानपान स्वास्थ्यकर हुनुपर्छ । तर, हामीले भान्सामा त्यस्ता गल्ती गर्छौ, जसले हाम्रो खाना अस्वस्थ्यकर बन्न पुग्छ । खाना पकाउदा हामीले…
11 hours ago 294 Views
तरकारीमा भएका हानीकारक रसायनलाई यसरी सफा गर्न सकिन्छ, तरिका सहित
स्वास्थ्यका लागि हामी हरियो सब्जी, फलफूल सेवन गर्छौं । तर, हामीले दिनहुँ खाने यि खाद्यपदार्थमा बिषाक्त तत्व पनि हुन्छ ।…
11 hours ago 340 Views
दुधमा बेसार हालेर पिउनुका यी हुन् चमत्कारी फाइदाहरु
दुध स्वास्थ्यका लागि जति गुणकारी मानिन्छ, उत्तिनै बेसार पनि । यी दुबैमा औषधीय गुण पनि हुन्छ । कति यस्ता चिज…
11 hours ago 2306 Views
टुसाएको गेडागुडी फाइदाकारी छ तर खानु अगाडी यति होस नगरे हानी गर्छ
टुसाएको गेडागुडी स्वास्थ्यकर हुन्छ । तर, यसको सरसफाईमा पर्याप्त ध्यान दिइएन भने यो हानिकारक साबित हुन्छ । किनभने, जब यो…
11 hours ago 1633 Views
यस्ता भाँडामा खाना पकाउनु स्वास्थ्यका लागि हुन्छ लाभदायक
खानेकुरामा विभिन्न पोषक तत्व हुन्छन् । तर खानेकुरा पकाउने र खाने क्रममा ती सबै पोषक तत्व हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौं…
12 hours ago 28 Views
यो पनि तपाईको लागि
बढी उमेर ग्याप भए दाम्पत्य जीवनमा के असर गर्छ ?
हामीकहाँ के मान्यता छ भने, पतिभन्दा पत्नीको उमेर कम हुनुपर्छ । हुन्छ पनि यस्तै । अपवादमा केही पत्नी पतिभन्दा बढी…
9 months ago 1515 Views
मासु नखादा शरिरलाई यी २५ फाइदा हुने रहेछन्, मासु खानेले पढ्नै पर्ने
मिठो खानेकुराको प्रसंग आउनसाथ हामी मासु सम्झन्छौ । मासुको परिकार हामीलाई स्वादिलो लाग्छ । तर, स्वस्थ्यकर नि ? मासु स्वस्थ्यकर…
3 months ago 2262 Views
निरोगी हुन अम्लिय र क्षारिय खाना खानु पर्छ रे, यस्ता कुरा रहेछन् अम्लिय र क्षारिय खानाहरु
सामान्यतः हामी जुन मिठो लाग्छ, त्यही खानेकुरा बढी खान्छौ । मिठो नलाग्ने खानेकुरा खाँदैनौ । अर्थात स्वास्थ्यका लागि भन्दा पनि…
3 months ago 329 Views
यादका टुक्राहरुमा तपाईले प्रेम र सम्बन्धका बारेमा लेखहरु पढ्न पाउनु हुनेछ । यसमा भएका सामग्रीहरु अन्यत्र कुनै किसिमले प्रयोग गरेमा कपिराइट क्लेम गरिनेछ । धन्यवाद ।
आफ्नी प्रेमिकालाई ‘म साँचो प्रेम गर्छु’ भनेर कसरी महसुस गराउने?
1 day ago 15857 Views
केटी मान्छेहरु यस्ता केटाहरुलाई मन पराउँछन्
1 day ago 9238 Views
यी ५ संकेतहरु देखिए तपाईंको सम्बन्ध दिगो हुनेवाला छैन
13 hours ago 6315 Views
बिहे गर्दा सात फन्का घुम्दा यी सात बचनका लागि घुमिन्छ र यीनको अर्थ यस्तो छ
12 hours ago 3439 Views
आलुको बोक्रा कसैले फ्याल्छ भने यो गल्ति गर्दैछ, पढ्दा बुझिन्छ
1 day ago 3189 Views
रहरले गर्ने होइन सम्बन्ध विच्छेद, त्यसपछि पनि सोचे झैँ जिन्दगी हुदैन
12 hours ago 1969 Views
कहिलै पनि नफ्याल्नु बासीभात, यति गरे जडी ओखति बन्दछ
1 day ago 1830 Views
© Copyright 2020 यादका टुक्रा